डेनिस दबाइ "Bifiform" दुवै बच्चाहरु र वयस्क मा dysbiosis को उपचार को लागि probiotics एक श्रृंखला बुझाउँछ। "Bifiform" - संयोजन लागूपदार्थ, को संरचना जो को आंतों वनस्पतिहरूको normalizing धेरै घटक सामेल छन्।
यो धेरै प्रकारका मा दबाइ उत्पादन: यो दानाको, पाउडर वा थोपाहरूद्वारा पाउन सकिन्छ। आफ्नो कार्य दबाइ सिफारिस गरिएको छ जो रोगी, को उमेर मा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, वयस्क रोगी सामान्यतया "Bifiform" दाना लिन सिफारिस गरिएको छ। तिनीहरूले एसिड घुलनशील र केवल मानव पेट छन्। bifidobacteria र enterococci, लाभदायी जीवाणुहरु को पेट मा गुणन सीधा मद्दत गर्छ जो - दाना सामग्रीहरू।
एक वर्ष भन्दा पुरानो बच्चाहरु dysbiosis को रोकथाम लागि फरक निरूपण प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ: "। Bifiform बच्चा" लागूपदार्थको यो एक पाउडर रूपमा प्रस्तुत र lactobacilli, bifidobacteria र भिटामिन समावेश गरिएको छ। छोराछोरीको लागि पुरानो भन्दा तीन वर्ष chewable ट्याब्लेटको को रूप मा उत्पादन जो "Bifiform बच्चा", प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पनि बजार मा थप दृश्य "Bifiform" लागूपदार्थको तपाईं शायद पाउन असम्भाव्य छन् जो को analogues छ। यो "Bifiform बच्चा" - जन्म देखि बच्चाहरु मा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जो घटेको को फारम, एक आहार पूरक।
(एक स्वस्थ आंतों वनस्पति को भाग हो जो समावेश ब्याकटेरिया,) मात्र प्रोबायोटिक को गुण जोडती एक दबाइ, तर पनि prebiotic (सहायक पदार्थ लाभदायक जीवाणुहरु को प्रजनन समर्थन समावेश) - जोर "Bifiform" भन्ने तथ्यलाई मा राखिएको हुनुपर्छ।
तपाईंले खरिद गर्न धेरै महँगो भने "Bifiform" analogs एक सानो सस्ता पाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि, यो सामान्यतया "Lineks" र "Normoflorin" रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले पनि जो dysbacteriosis को उपचार गर्न योगदान biologically सक्रिय additives छन्।
त्यहाँ औषधि प्रयोग गर्न संभावना छ भने "Bifiform" analogues आवश्यक छैन। यो उपकरण यसलाई राम्रो तरिकाले दुरुस्त र प्राकृतिक आंतों वनस्पतिहरूको राख्छ अन्य लागूपदार्थको संग पारस्परिक, तपाईं भिटामिन अवशोषित गर्छ।
जसको संरचना पूर्ण सुरक्षित छ, धेरै अध्ययन, तर पनि आवेदन मा अनुभव को धेरै वर्ष द्वारा मात्र प्रमाणित "Bifiform", एकदम रोगी गरेको अवस्था सुधार गर्न केही दिन छ मद्दत गर्छ। तसर्थ, डाक्टर यो सिफारिस "Bifiform" - analogs सधैं रोग संग छैन सामना गर्न सक्नुहुन्छ।
दबाइ एक dysbacteriosis मा, तर पनि एलर्जी प्रतिक्रिया मा, पछि साथै वा एन्टिबायोटिक को एक पाठ्यक्रम मात्र होइन discharged छ। यो प्रतिकूल प्रतिक्रिया को क्षण मा पत्ता गरिएको छ हुनत, आफ्नै "Bifiform" लिने छैन।
दबाइ को औषधिको खुराक र प्रत्येक व्यक्तिगत मामला मा उपचार को अवधि। उदाहरणका लागि, वयस्क प्रति दिन दुई दाना लिन सामान्यतया आवश्यक छ। केही अवस्थामा मा, खुराक बढाउन सक्छ, तर प्रति दिन चार कुनै अधिक दाना। उपचार को पाठ्यक्रम धेरै हप्ता धेरै दिन देखि पछिल्लो गर्न सक्छन्, तर अब 21 दिन भन्दा।
तीन वर्ष मुनिका बच्चाहरु एक दिन होइन भन्दा बढी तीन पटक "Bifiform" पाउडर, एक खुराक लिन प्रोत्साहित गरिन्छ। यो उमेर भन्दा छोराछोरीलाई, तपाईं दिनमा दबाइ दुई खुराक, अधिक भन्दा तीन पटक लाग्न सक्छ। यदि ट्याब्लेटको प्रयोग गरिन्छ, तीन वर्ष देखि बच्चाहरु लागि औषधिको खुराक - एक दिन तीन पाटी भन्दा कुनै थप। कोर्स अवधि - सामान्यतया कम्तिमा पाँच दिन।
लाभदायी जीवाणुहरु सम्म 25 डिग्री हत्या छैनन् एक तापमान हुनुपर्छ "Bifiform" राख्नुहोस्। दबाइ को समय को लागि, यो खाना सेवन निर्भर गर्दैन र, त्यसकारण, रोगी लागि कुनै पनि सुविधाजनक समयमा यो दबाइ लिन। फार्मेसी "Bifiform" मा एक निर्धारण बिना उपलब्ध छ। दबाइ को लागत तीन सय rubles देखि सुरु हुन्छ।
"Vitaprost गुण" - दबाइ बारेमा सत्यता
Aphrodisiacs - औषधि पसल र मात्र
चिकित्सा 'Methotrexate'। निर्देशन
"Bronhorus" (सिरप): निर्देश पुस्तिका, समीक्षा, वर्णन
योनी suppositories 'Betadine' समीक्षा
पुरानो cervicitis: कारण, लक्षण र निदान
उच्च हृदय दबाव बारेमा चिन्तित? के गर्न र यसलाई अहिले पत्ता लगाउन कसरी कम गर्न!
कार वाशको लागि व्यावसायिक उच्च-दबाव क्लीनर
Transplantation पहाडी र विशेष गरी गहन हेरविचार वृद्धि मा।
कसरी Minecraft मा छाला राख्न: निर्देशन
हाम्रो लागि के सुत्नेसमय तयार: के toads सपना?
आफ्नै हातले कपाल चम्कने लागि मास्क
पेरिस 1889 मा विश्व प्रदर्शनी